Itoobiya oo Sheegtay Iney Dibadda U Iib Geeneyso Shidaalka Ay Ka Qodanayso Dhulka Soomaaliyeed. – Shabakadda Amiirnuur
Itoobiya oo Sheegtay Iney Dibadda U Iib Geeneyso Shidaalka Ay Ka Qodanayso Dhulka Soomaaliyeed.
December 6, 2018 12:19 pm by admin Views: 86
Dowladda Itoobiya ayaa faahfaahin ka bixisay qorshaheeda ku aadan shidaalka faraha badan oo ku jira dhulka Soomaaliyeed (Soomaali Galbeed) ee ay gumeysiga ku haysato.
Wasiirka Macdanta ee xukuumadda Abeey ayaa sheegay in muddo sadax sano gudahood ah ay kusoo gabagabeynayaan qodista shidaalka ku jira dhulka Soomaali Galbeed, kadibna uu qorshahoodu yahay iney dibadda u dhoofiyaan.
Dhaqaalaha kasoo baxa shidaalkan Soomaaliyeed ayuu sheegay in lagu hir galinayo mashaariic waaweyn oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta dadka Itoobiyaanka ah.
Wasaaraddu waxay qirtay in shidaalka dhulka Soomaaliyeed uu yahay mid ballaaran oo aan la qiyaasi karin, isagoo intaa ku daray in sidoo kale ay shidaal ka qodi doonaan dalka kale ee Itoobiya sida:-Abbay, Rift Valley,Metema, Mekelle iyo Gambella, laakin wuxuu sheegay in markii ugu horreysay ay shidaalka kasoo saaranayaan dhulka Soomaali Galbeed.
Shidaalka la doonayo in la boobo ee ku jira dhulka Soomaaliyeed ayay Itoobiya barbar dhigeysaa buuraley dalkooda ah oo laga helay shidaal aan sidaa u badnayn, ujeedaduna waxay tahay in shidaalka Soomaalida loo qeybiyo si siman iyadoo aan mudnaan la siineyn dadka xoogga lagu qaadanayo kheyraadkooda.
Anwar Cishqi oo kamid ahaa sirdoonka Itoobiya ayaa dhowr sano ka hor shir ay Yahuuddu soo qabanqaabisay ka sheegay in dhulka Soomaali galbeed uu ku jiro shidaal sidii wabiga oo kale u durduraya, waana midka ay haatan Xabashidu ku maman yihiin.
Halka ugu sii badan ee uu Soomaali Galbeed shidaalka kaga jiro waa “Shilaabo” sida ay sheegeen khubarada aqoonta u leh kheyraadka dabiiciga ah iyo hey’adihii baaritaanka kusoo sameeyay intaba.
Tan waxay muujineysaa in sharciga maanta dunida ka jiraahi uu yahay kan duur joogta. Dunidu dadka ku nool waxay noqdeen kuwa wax ku dul nool iyo kuwa lagu dul nool yahay oo xoog looga qaato waxa ay heystaan, qolana kama baxayso dulliga illaa ay yeelato awood ay ku qaabisho cid kasta oo xaqeeda duudsiineysa.